scheduleशुक्रवार कार्तिक १४ गते, २०७७
नयाँ दिल्ली, १० असोज । भारतको निर्वाचन आयोगले विहार विधानसभा निर्वाचन ३ चरणमा हुने समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ । अक्टोबर २८, नोबम्बर ३ र ७ तारिख मतदान हुने छ भने मतगणना नोभेम्बर ७ मा हुनेछ । निर्वाचन आयोगको यो घोषणासँगै कोरोना महाव्याधीको कारण निर्वाचन केही समय पर सार्नु पर्ने बहसको अन्त्य भएको छ ।
विहार नेपालसँग सीमाना जोडिने भारतको उत्तरी प्रदेश हो । नेपालको प्रदेश १, २ र ५ सँग विहारको सिमाना जोडिन्छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव नरोक्ने निर्णय गरेसँगै त्यहाँ राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो सतर्कता बढाउनुपर्ने छ ।
विश्वका ७० बढी देशले यस बीचमा कोरोना महाव्याधीलाई कारण मान्दै निर्वाचन स्थगन गरेका छन् । तर दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, मंगोलिया, श्रीलंका आदि देशमा यही बीचमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन स्थगन गरिएन ।
विहारको विधानसभा २४३ सदस्यीय छ । विहारमा ‘सुशासन बाबु’ को छवि बनाएका जनता दल युनाइटेडका नेता नितिश कुमार विगत दुई कार्यकालदेखि निरन्तर सत्तामा छन् । सन् २०१५ को विधानसभा निर्वाचनमा उनले भाजपा विरुद्ध महागठबन्धन बनाएका थिए । तर कार्यकाल पूरा नहुँदै लालु यादब नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दलसँगको गठबन्धन भङ्ग गरी भाजपासँग मिलेर सरकार चलाएका थिए ।
विहारमा नितिश कुमारको उदय हुनुअघि लालु यादब र रावडीदेबीको सरकार थियो । उनीहरुको सरकारलाई ‘जंगलराज’को रुपमा चर्चा गरिन्थ्यो । सत्तामा आएसँगै नितिशले गुण्डागर्दी नियन्त्रणबाट आफ्नो छवि निर्माण गरेका थिए । नितिशको कार्यकालमा विहारको आर्थिक उन्नति विगतको तुलनामा राम्रो भएको तथ्यांकहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
यसपटक पनि सत्तारुढ पार्टीहरुले नितिश कुमारलाई नै भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा भाजपा र जनता दल युनाइटेडका अतिरिक्त केही साना दलहरु छन् । भाजपाका प्रदेश नेता सुशिलकुमार मोदी नितिश सरकारमा उपमुख्यमन्त्री थिए ।
राष्ट्रिय जनता दल, राष्ट्रिय कांग्रेस, भाकपा मार्क्सवादी, भाकपा, भाकपा ( माले, लिवरेशन ) विहारका मुख्य विपक्षी दलहरु हुन् । विपक्षी दलहरु बीच पनि गठबन्धन हुने सम्भावना छ । त्यसका अतिरिक्त राम विलास पासवान नेतृत्वको लोकशक्ति पार्टी र पूर्वमुख्यमन्त्री जितनराम माझी नेतृत्वका साना दलहरु छन् । यी दलहरु दुई मध्ये कुनै एक गठबन्धनमा सामेल हुनेछन् ।
कुनै पनि विपक्षी दलले भावी मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार प्रस्तावित गर्न सकेका छैनन् । यसले नितिश कुमार र सत्तारुढ गठबन्धनलाई नै फाइदा पुग्ने ठानिएको छ ।
राष्ट्रिय जनता दलका नेता लालु यादव भष्टाचारको मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेको कारणले पनि नितिश कुमारलाई चुनौति दिने हाराहारीको नेता नभएको विश्लेषण गरिंदैछ । लालुका छोरी तेजस्वी यादव विपक्षी नेताहरुमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली र लोकप्रिय मानिन्छन । विपक्षी गठबन्धन सत्तामा आएमा तेजस्वी यादव मुख्यमन्त्री हुन् सक्ने बताइन्छ ।
विगत केही वर्ष यता राष्ट्रिय चर्चामा रहेका विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार विहारकै हुन् । विपक्षी दलहरुले कन्हैयाको लोकप्रियतालाई भजाउन प्रयत्न गर्नेछन् । उनी यसपटकको विधानसभा निर्वाचनमा विपक्षी दलहरुको स्टार प्रचारक हुने बताइन्छ ।
कतिपयले कन्हैया कुमारलाई नै भावी मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने तर्क गरे पनि त्यो सम्भावना क्षीण छ । कन्हैया कुमारको पार्टी भाकपा विहारमा निक्कै कमजोर छ ।
विहार राजनीतिमा लालु र नितिश कुनै समयका साथी थिए । उनीहरु दुवै जेपी आन्दोलनमा संलग्न हुँदै विद्यार्थी क्षेत्रबाट राजनीतिमा उदाएका थिए । उनीहरु बीचको प्रेम–घृणाको खेलले विहार राजनीतिमा अनेक मोडहरु आएका छन् ।
२०१४ को लोकसभा निर्वाचनदेखि भाजपा विहार राजनीतिमा निक्कै शक्तिशाली भएको छ । तर २०१५ को विधानसभा निर्वाचनमा सबै विपक्षीहरु एक भएपछि भाजपाले एकल बहुमत ल्याउने सम्भावनाको रथ रोकिएको थियो । त्यही घटनाक्रम नदोहोरियोस भनेर भाजपा नितिश कुमारलाई अघि सार्न बाध्य छ । अन्यथा प्रदेशसभा जनता दल युनाइटेडभन्दा भाजपा ठूलो दलका रुपमा आउने निश्चित जस्तो देखिएको छ ।
विहारमा अहिलेसम्म भाजपा नेतृत्वको सरकार बनेको छैन । भाजपा रणनीतिकारहरुका अनुसार यो नितिशका लागि अन्तिम अवसर हो । अर्को चुनावदेखि भाजपा आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव लड्ने रणनीतिमा हुनेछ ।
भाजपाको तर्फबाट विहार चुनाबको कमाण्ड केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह आफैले लिने बताईएको छ ।
विपक्षी दलहरुलाई सरकार विरोधी भावनाको सहजता भए पनि समग्रमा सत्तारुढ गठबन्धन नै हावी हुन् सक्ने स्थिति बन्दै गएको विश्लेषकहरुको ठहर पाइन्छ ।
फिचर पोस्ट, ब्लग, विश्व, साझापोस्ट सिफारिस
भारत–अमेरिका बीच टु प्लस टु वार्ता र बेका सम्झौता
कमला ह्यारिसः ट्रम्पको घृणा र वाइडनको भरोसा
पर्सा हत्याकाण्ड: ‘आत्मआलोचना’ गरेर गुपचुप गर्न पाइने नेकपाको ‘आन्तरिक बिषय’ हुन सक्दैन
थाइ प्रदर्शनको मागः राजा नसुध्रिए राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ
नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको खोजीमा डोल्पा
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संकेत गरेको ‘भष्मासुर’ को हो ?
नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो खिचडी
यी हुन् दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव हारेका अमेरिकी राष्ट्रपति, ट्रम्पको के होला ?
फिचर पोस्ट, राजनीति, स्वास्थ्य
कोरोनासँग ओली सरकारको आत्मसमर्पणः हर्ड इम्युनिटी कि आमहत्या ?
‘भत्ता फिर्ता’ विष्णु पौडेलको ‘जग्गा फिर्ता’जस्तै, ढोंगीहरुको लोकरिझ्याईवादी हल्लाले नीतिगत बहस ओझेलमा
फिचर पोस्ट, मुख्य समाचार, राजनीति, विश्व
न्युजिल्याण्डमा पुरानो पार्टीलाई पुनर्जीवन दिएको ज्यासिन्डा विजयको विश्वसन्देश
दिग्भ्रमित ‘ईश्वर’ को ‘भगवान भरोसे’ मार्गचित्र
अर्थ / व्यापार, फिचर पोस्ट, राजनीति
अविश्वास र चुनौतिको चाङमुनि पौडेलको अर्थ मन्त्रालय प्रवेश
‘ओली-पथ’मा ‘प्रचण्ड–पीडा’को पराकाष्ठा
बूढीगण्डकी, बाबुराम र शीर्ष नेताहरुको आर्थिक जीवन
सरकार ! राजनीतिक महामारी रोकेर चाडपर्वमा कोरोना महामारी रोक्न लाग
अमेरिकासँगको बेका सम्झौता भारतलाई महङ्गो सौदा सावित हुनसक्छ
बेसिक एक्सचेन्ज एण्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट (बेका) मा हस्ताक्षर गरेर भारतले आफ्ना तीन सेनाहरु- सेना, वायुसेना र नौसेनाको डिजिटलाइज्ड...
दाहालले बालुवाटारको तारिख धान्न छाडेपछि नेपाललाई निम्ता
काठमाडौं, १४ कात्तिक । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अध्यक्षद्वयबीच शितयुद्ध चलिरहेको छ । अघिल्लो महिना...
अमेरिकी चुनावः ट्रम्पभन्दा झण्डै १२ प्रतिशत मतले बाइडेनको अग्रता
वासिङ्टन, १३ कात्तिक । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेनले...
१५ वर्षभित्र चीनलाई ‘महान आधुनिक समाजवादी राष्ट्र’ बनाउने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निर्णय
बेइजिङ, १३ कात्तिक । सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औं केन्द्रीय समितिको ५ औं पूर्ण बैठक बेइजिङमा सम्पन्न भएको...
गण्डकी प्रदेशमा बिहीबार थपिए १०२ कोरोना सङ्क्रमित, तीनजनाको मृत्यु
पोखरा, १३ कात्तिक । गण्डकी प्रदेशमा थप १०२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या...
पैगम्बरको जन्मदिनमा सार्वजनिक बिदा
जनकपुर, १४ कात्तिक । प्रदेश २ मा शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ । इस्लाम धर्मका प्रवर्तक पैगम्बर...
चौरासिया मृत्यु प्रकरणका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिइन्न: डिआइजी सिंह
एसपी यादव/ सर्लाही, १३ कात्तिक । गत बिहिवार पर्सा जिल्लाको विन्दवासनी गाउँपालिकामा भएको नेकपा पार्टीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा...
समुदायस्तरमै तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण
नुवाकोट, १३ कात्तिक । नुवाकोटको विदुर र वेलकोटगढी नगरपालिकामा समुदायस्तरमा तीव्र गतिमा कोरोना सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिन...